#BIM - Nidaamyada biyaha isticmaalaya Revit MEP - Geofumadas
#BIM - Nidaamyada biyaha isticmaalaya Revit MEP
Baro inaad u isticmaasho barnaamijka 'REVIT MEP' ee naqshadaynta Qalabka Nadaafadda.
Ku soo dhowow koorsadan Xarumaha fayadhowrka oo leh Revit MEP.
Waxaad ka sarrayn doontaa laga bilaabo isfahamka ilaa abuurista qorshayaasha.
Waxaad ku baran doontaa tan ugu caansan, mashruuc degenaansho oo dhab ah oo ah heerarka 4.
Talaabo talaabo ayaan kuugu hanuunin doonaa, uma maleyn doono inaad wax ka taqaanid Dib u noqo, midna Fayadhowrka.
Haddii aad ka qoomameyso ama aadan ka fileyn waxa aad rajeysay, waxaad weydiisan kartaa soo laabashadaada.
Waxay usii socon doontaa horumarinta waqti kadib, iyadoo ku darey horumarin iyo cusbooneysiin.
MAALIN: Waxyaabaha ku jira YouTubeWaxay ku baraysaa inaad istcimaasho barnaamijka laakiin waa la habeeyay oo ma yaqaan sharci ama qaabeyn qaab. Baro sida loo isticmaalo QIIMEYNTA waa garan la ’ Hawada, ama laan kale oo farsamo sida koronto ama qaab dhismeed. Waxaan kugu casuumay inaad iska eegto naftaada.
Halkan waxaad ku baran doontaa sida loo isticmaalo aaladaha lagama maarmaanka u ah abuuritaanka diyaaradaha tamarta-biyaha mashruuc kasta oo dhisme ah. Nuxurka koorsadan ayaa loo kala saari karaa qaybo kala geddisan, oo mid walbaa ku horumarinayo marxalad muhiim ah Naqshadeynta hydrosanitary:
Sharraxaadda waxa ku jira:
Biyo qabow iyo Biyo Kulul oo wata Revit MEP.
Module Kowaad ee barnaamijka BIM oo leh Revit: Rakibaadaha nadaafadda.
Halkan waxaad ku baran doontaa sida loo isticmaalo aaladaha lagama maarmaanka u ah si aad u bilowdo mashruuc gudaha ah Dib u noqorar qoysaska caafimaadka iyo abuurto nidaamyada tuubooyinka biyaha kulul iyo qabow. Waxaad sidoo kale baran doontaa inaad is-cabbiriso nidaamyadan iyadoo la adeegsanayo qalabkii xisaabinta ee ay soo bandhigtay barnaamijka.
Qaybta Kowaad - Hordhac iyo aalado:
Baro sida loo xero qorshe dhismaha iyo qalabka fayadhowrka.
Qaybta Labaad - Nidaamyada Pipe:
Baro sida loo dhejiyo loona xiro tuubooyinka gacanta si toos ah iyo si otomaatig ah.
Qeybta Saddexaad - Biyo Kulul iyo Dhexroor:
Baro sida loogu dhex daro biyaha kulul oo xisaabtana dhexroor otomatik ah.
Daloolka iyo Hawo-mareenka leh Revit MEP.
Module Labaad ee barnaamijka BIM oo leh Revit: Rakibaadaha nadaafadda.
Halkan waxaad ku baran doontaa sida loo isticmaalo aaladaha lagama maarmaanka u ah abuuritaanka nidaamyada qulqulka iyo hawo-mareenka, oo ay ku jiraan qaybo muhiim ah sida buufiska. Intaa waxaa sii dheer, waxaad yeelan doontaa awood aad ku abuurto kumbuyuutaro qaabeed si aad ugu shaqeyso mashaariicda sumadda iyo dhismayaasha si dhakhso leh.
Qeybta Koowaad - Daadad:
Baro sida loo dhigo bullaacadaha oo loo abuuro nidaamyo bullaacad
Qaybta Labaad - Siphons:
Baro sida loo saxo qoysaska iyo sida saxda ah ee u dhexeeya nidaamka.
Qaybta saddexaad - Afkaarta:
Baro sida loo naqshadeeyo naqshadaha markii aad la shaqeyneyso dhismayaasha ama dhirta sumadda ah.
Qeybta Afaraad - Suuqa:
Baro sida loo abuuro hawo marooyin si ay ugu xiraan nidaamka bulaacadda.
Waxyaabaha ay ka mid yihiin Waxqabadka Tamarta ee Revit MEP.
Module saddexaad ee barnaamijka BIM oo leh Revit: Rakibaadaha nadaafadda.
Halkan waxaad ku baran doontaa sida loo xardho ama loo sameeyo bambooyin, matoorro, taangiyada, alwaaxyada, qashin-gooyeyaasha, dabinnada dufan iyo qaybaha kale hydrosanitary siyaabo kala duwan
Qaybta Kowaad - Waxyaabaha Sahayda:
Baro sida loo dhejiyo bambooyinka iyo taangiyada. Sidoo kale bartaan sida loogu sameeyo mashiinka ceelka.
Qaybta Labaad - Qaybaha Ururinta:
Baro sida loogu daydo diiwaannada iyo dabinka dufannada siyaabo kala duwan.
Abuurista qorshayaasha leh Revit MEP.
Module Afaraad ee barnaamijka BIM oo leh Revit: Rakibaadaha nadaafadda.
Halkan waxaad ku baran doontaa sida loo abuuro sumadaha, wicitaanada, qaybaha, miisaska, faahfaahinta iyo walxaha kale ee lagama maarmaanka u ah soo bandhigidda diyaaradaha tamarta-biyaha mashruuc dhisme kasta.
Qaybta Kowaad - Qorshayaasha, Calaamadaha iyo Wicitaannada:
Baro sida loo calaamadeeyo tuubooyinka iyo aaladaha, ku dar qoraallo farsamo oo waxaad la shaqeysaa miisaamo kaladuwan isla diyaaradda.
Qaybta Labaad - Miisaska, Qeybaha iyo Faahfaahin:
Baro in aad ku sheegto waxyaabaha ku qoran shaxannada tirada oo aad u soo dejiso faahfaahin muhiim ah ilaha kala duwan ee dibedda ah.
MAALIN: Koorsadani waxaa lagu horumariyay nooca 2018. 99% waxyaabaha ku jira ayaa wali isku mid ah, sikastaba ha u baadi goobo doodaha wixii isbedel ah oo muhiim ah.
Hel laysanka Revit ardayga
Mashruuc ka samee Revit
Abuur, habeyn iyo habeyn ku sameeyo nidaamyada biyo-nadiifinta
iyo waxbadan oo dheeri ah!
Aqoonta aasaasiga ah ee Revit ayaa lagula talinayaa, laakiin looma baahna.
Aqoonta aasaasiga ah ee Qalabyada Nadaafadda ayaa lagula talinayaa, in kasta oo aan loo baahnayn.
Injineerinka ama Xirfad-yaqaanada Architecture
Injineerinka ama Architecture Ardayda
Farsamayaqaanada Roobka / Farsamo-yaqaanada
Ganacsatada iyo Shirkadaha Wax Soosaarayaasha
Koorsooyinka BIM Koorsooyinka Electromechanics ee BIM
Post Previous«Previous #LAND - Koorso Madaniga ah 3D loogu talagalay shaqooyinka madaniga ah - Heerka 1
Post Next #GIS - Koorsada Geolocation for Android - adoo adeegsanaya html5 iyo Khariidadaha GoogleNext »